Efa vita ny azy fa isika dia tompon’adidy mba hanome “hasina” izany ra latsaka sy aina nafoy izany amin’ny alalan’ny fifankatiavana sy firaisankina. Tsy nisy nivoy fisarahana mihitsy izy ireo ary nampiseho fiombonana am-po. Ho fanomezam-boninahitra sy ho fahatsiarovana azy ireo, 75 taona aty aoriana, ny Roso ho an’ny demokrasia sosialy dia mihevitra fa toa azy ireo, ny tsirairay no miroso amin’ny fanavotam-pirenena. Mahafoy ny aminy ho an’ny firenena. Tsy ianteherana amin’ny hafa izany, tsy iandrasana mpitondra, noho ny fo sy fitiavana ny taniny sy ny taranany. Mino fa tsy fihetsiketsehana marevaka no sitrak’ireo raiamandrenintsika ireo anio raha teo izy fa fo mitempo fitiavana, fo madio, fo entanim-pinoana tsy azo ahontsana fa ho avotry ny firenena ary tsy avy amin’ny vahiny fa noho ny ataon’ny zanany. Manameloka ireo mahasahy manao ratsy eto amin’ny firenena amin’ny alalan’ny halatra, ny fanararaotam-pahefana, ny fanararaotana ny fahantrana sy ny tsy fahalalana ireo mikasa ny hampisara-bazana ny samy Malagasy. Mampahatsiaro fa ny soatoavina Malagasy dia ny “fanahy” no maha olona fa tsy volamena na harena mihoam-pampana. Fepetra takiana amin’ny rehetra izany, indrindra, manoloana ny sedra sy ny fanamby tsy maintsy atrehina ankehitriny ho fampandrosoana an’I Madagasikara, hoy hatrany ny RDS.
Legende: Ny filohan’ny RDS, Fetison Rakoto Andrianirina